ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: နှလုံးသားစာ နှလုံးသားစကားများ
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 02, 2009
kokomaung.uk May 2, 2009 at 4:22 PM
ပန်းကဗျာရဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့စာ နှလုံးသားက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စကားလေးတွေကို မှတ်သွားပါတယ်။ အဆိုအမိန့်တစ်ခုက လူ့ဘ၀ကို ပြောင်းလွဲစေပါတယ်။
မိုးသောက်(ရှမ်းလေး) May 2, 2009 at 8:02 PM
အမြဲတမ်း ကွန်မန့်လေးတွေ၊ နုတ်ဆက်စကားလေးတွေနဲ့ လာလည်တတ်တဲ့ ပန်းကဗျာလေးရေ... အခုမအားသေးလို့ နောက်မှ စာတွေ အများကြီး လာဖတ်တော့မယ်နော်... ပန်းကဗျာနဲ့ May16 လဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ... နေ့တိုင်း စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပါစေ...
မြစ်ကျိုးအင်း May 2, 2009 at 11:55 PM
အမှတ်တရ သိမ်းထားသင့်တဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေပါ
ဆည်းဆာသံစဉ် May 3, 2009 at 2:17 AM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာသားလေးတွေ ဖတ်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...။
(အကြောက်တရားဟူသမျှကို မိမိထံ၌ မိမိဖာသာ သိမ်းထားပါ. .
ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိမူမှန်သမျှကို တခြားသူများအား မျှဝေပေးလိုက်ပါ. .။)
ဒီစာသားလေးကို ဖတ်ပြီး အားအင်တွေရှိလာသလိုပဲ...မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးအထူးဗျို့ ...။
နေဒေးသစ် May 3, 2009 at 3:01 AM
အကျိုးရှိတဲ့ စကားလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
yegyi May 3, 2009 at 1:01 PM
ကျွန်တော်က ဒီလို မှတ်သားစရာ ပြောဆိုချက်တွေကို စုနေတာဗျ အတော်ပါပဲ
ညခင်း May 3, 2009 at 5:21 PM
မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေယောင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရိပ်များနှင့်တူလေသည်. . . သာယာတောက်ပသော နေရောက်ထဲ၌ ကျွန်ုပ်တို့ လျှောက်လှမ်းနေသည့်အခါ တပူးတွဲတွဲရှိနေ၏ . . . မှောင်ရိပ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တိုို့ရောက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ခွဲခွာထွက်ခွာသွားလေတော့သည်. . .
ညခင်း May 3, 2009 at 5:22 PM
ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တယ်။ အဲလိုပဲနော်။
ဝလုံးဝိုင်းဝိုင်း May 5, 2009 at 2:34 PM
နှလုံးသားမှ နားဆင်မှု ပြုသွားပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမပန်း..။ :P
ဖိုးဂျယ် May 5, 2009 at 10:03 PM
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာလေးတွေ မှတ်သားသွားပါတယ်။
♥ Acacia ♥ May 6, 2009 at 3:12 PM
မှတ်သားသွားတယ် အဓိပ္ဒါယ်လေးတွေကလည်း တန်ဖိုးရှိတယ်...
yegyi May 18, 2009 at 7:11 PM
Comment ဆက်ပေးတယ်ဗျာ ဒါမျိုးလေးတွေ ဆက်ရေးပါဦး